ငါ VR porn ကိုကြိုးစားကြည့်တယ်၊ ငါတို့ F ** KED (NaughtyNomad.com) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌တင်သည်
ငါ KED (NaughtyNomad.com) ** VR porn ကြိုးစားခဲ့, ကြှနျုပျတို့fနေကြတယ်
[TRIGGER content များအတွက်သတိပေးမဟုတ်ဘဲပုံရိပ်တွေ] VR ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်ဘဝကိုပျက်စီးစေလိမ့်မည်။ နတ်ဆိုးတွေ၊ hedonism ၏ virtual ကမ္ဘာသည်ဗိုင်းရပ်စ်များကဲ့သို့ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည့်အထိတုန်လှုပ်ချောက်ချားဖွယ်၊ လက်လှမ်းမှီ။ ပျော်စရာကောင်းသည်။ VR-porn Borg သည်ဤတွင်ရှိပြီးခုခံမှုသည်အချည်းနှီးဖြစ်သည် (အနည်းဆုံးတော့အမျိုးသားအများစုအတွက်ဖြစ်သည်) ။
ငါထိခိုက်၌ငါ့လိင်ဘဝခဲ့ပုံကိုသဘောပေါက်သောအခါငါပထမဦးဆုံး 2012 အတွက်ညစ်ညမ်းတက်အပ်ပေးတော်မူ၏။ ဒါဟာငါ့အသက်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ် အလွန်အပြုသဘောဆောင်တဲ့လမ်းအတွက်။ တဦးတည်းအဆင့်မှာငါတစ်ခုတည်းကဗီဒီယိုကိုမြင်လျှင်မပါဘဲနီးပါးသုံးနှစ်ကြာသွား၏။
VR နည်းပညာတစ်ခုအစောပိုင်းမွေးစားအဖြစ်, ပထမဦးဆုံးမှာကိုယ့် Jurassic Park မှာဒါမှမဟုတ် space ကိုကြိတ်စက် Coaster အပေါ်ဖြစ်အတော်လေးပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်။ (ဒီမှာ ရှက်စရာဗီဒီယိုတစ်ခု ) ငါ့ကိုပထမဦးဆုံးကကြိုးစားနေနှင့်ငါ့အတွင်းစိတ်ကလေးနဲ့အတူတဖန်ချိတ်ဆက်ပေးနေသည်။ ဒါဟာအားလုံးဒါအပြစ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါပေမဲ့တခြားလူတိုင်းငါဒိုင်နိုဆောအတွက်ဒါစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့သို့မဟုတ်အာကာသအတွင်းမျောဖို့ကပြသခဲ့သည်။ အရာတစ်ခုမှာမိမိတို့၏စိတ်ကိုသိမ်းပိုက်: တူ porn ဘာလဲ
ဝန်ခံရမည်, ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်စပ်စုခဲ့ပါတယ်။ ငါကတစ်ဦးနီးပါးဘာသာရေးအတှေ့အကွုံခဲ့လျှင်အဖြစ် Duncan က Trussel အဆိုပါဂျိုး Rogan ပြပွဲပေါ်မှာအကြောင်းပြောဆိုစကားကိုကြားင်။
ငါသည်ငါ့သိချင်စိတ်ငါ့ကိုပိုကောင်းတယ်ငါပြိုကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး, အကျိုးဆက်များကိုစိုးရိမ်သောကာလပတ်လုံးငါတတျနိုငျသအဖြစ်များအတွက်ရမ္မက်ဘက်မှာစစ်တိုက်ကြသော်လည်း, တယောက်တည်းအထီးကျန်တနင်္လာနေ့ညဥ့် T-အဆင့်ဆင့်နှင့်လိင်စိတ်မိုးသည်းထန်စွာကီထိုင်ထံမှဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်။ ငါမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးပေါ်တွင်တင်နှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပလပ်။
အဆိုပါ Matrix ထည့်သွင်းခြင်း
ကျွန်တော့်မျက်လုံးတွေပွင့်လာပြီးဆိုဖာပေါ်နိုးလာတယ်။ ငါလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အရာအားလုံးအဖြူရောင်တောက်ပနေသည်ရှိရာ plush တိုက်ခန်းတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာပါ။ အခုငါငုံ့ကြည့်လိုက်တော့ငါ့ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ကိုယ်ထည်ကိုတွေ့တယ် ခံစားချက်များကို ငါ့လိုပဲ ဒါဟာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းကနေလေဖြတ်တဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုနဲ့တူတယ်။
ငါဒေါက်ဖိနပ်ကြားရတယ်၊ မိန်းမပျိုလေးလှေကားတစ်စင်းပေါ်တက်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူမအညိုဆံပင်နှင့်တောက်ပသောမျက်လုံးများရှိသည်။ သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းကျပ်ပြီးခွေးဆွေးနေတယ်။ သူမလှည့်စားနေသောလမ်းလျှောက်ရင်းငါ့ကိုပြုံးသည်။
သူသည်ငါ့ crotch များ၏ရှေ့မှောက်၌နှိမ့်ချဒူးထော။
သူမက“ ငါညထဲနေသင့်တယ်လို့ထင်တယ်” ဟုနိမ့်ကျစွာအသနားခံကာသူမ၏မျက်လုံးများကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကြည့်သည်။
ဒါဟာတကယ်ကိုခံစားရတယ် ဤရွေ့ကား pixels ကိုအခုအချိန်မှာငါ့ဝိညာဉ်ကိုထိုးဖောက်ငါ့အ nutsack တိုင်အောင်လမ်းတလျှောက်လုံးငါ့ကိုမှတဆင့်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါ့ကိုhardရာ Hard- အပေါ်ပေးနေကြသည်။ ငါ့ရဲ့မျောက် ဦး နှောက်ကခြားနားချက်ကိုမသိဘူး။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ကွယ် ဦး နှောက်က၎င်းကိုသိသော်လည်း၎င်းသည်တောရိုင်းတပ်မက်ခြင်းအားဖြင့်လုံးဝရှောင်ကွင်းသွားသည်။
နောက်ထပ်မိန်းကလေးတစ်ဦး, ဆံပင်ရွှေရောင်ကြီးမားသောရင်သား, လှေကားကဆင်းလာ, ထိုသို့ပထမဦးဆုံး kilobyte မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာပါပဲ။
"ငါသည် join လျှင်သဘော?" သူမကဆိုသည်။
သူမကဒူးထောက်လိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းမှာကျွန်တော့်ဘောင်းဘီကိုခွာလိုက်ပြီးမိခင်ရဲ့မျက်ရည်များမှာဆာလောင်မွတ်သိပ်နေသောဝက်ဝံများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်၏ virtual joystick ကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။
သူမကမင်းကိုပြန်စကားမပြောတော့ဘူး၊ မင်းကမင်းရဲ့ရည်းစားထက်ပိုပူတယ်၊ သူကစိတ်မထိန်းနိုင်မဖြစ်ရင်မင်းက fuck လို့မရဘူး။
သူမသည်စင်ကြယ်သောမိမိကိုယ်ကိုအလိုလျောက်အပျော်အပါးအတွက်ထိုတွင်ရှိနေပြီးကိုကင်းကိုအက်ကွဲသည်ထက် ပို၍ စွဲလမ်းစေလိမ့်မည်။ ပထမ ဦး ဆုံး dopamine ထိမှန်မှုက zombified စိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
"သနျ့ရှငျးသောကင်လုပ်ခိုင်း။ အဲဒီ Shit ရဲ့ပြင်းထန်သောပါပဲ။ ဤသည်အရာခပ်သိမ်းကိုပြောင်းလဲလိမ့်မယ်။ "
ပုံမှန် porn နှစ်တစ်ထောင်အတွက်လုံလောက်သောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုပြီးသားတိုးတက်မြင့်မားလာနေသည် ယောက်ျားတို့တွင်။ T- အဆင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကျဆင်းနေကြသည်။ ယခုစုံတွဲသည်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်ကထက်ယခုလိင်ဆက်ဆံမှုနည်းပါးနေပြီးသူတို့၏ဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ဘ ၀ များတွင်ပျော်ရွှင်မှုနည်းကြောင်းအစီရင်ခံကြသည်။ (ပိုမိုသိရှိလိုပါကထွက်စစ်ဆေးပါ Porn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်.)
ဒီနည်းပညာအသစ်နှင့်အတူအမှုအရာရသွားကြသည် ဝေး ပိုဆိုး။
ငါစစ်မှန်စွာဒီနည်းပညာနှင့်အတူ sexualized သူလာမယ့်မျိုးဆက်အဘို့ကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။
ဒီအထီးဦးနှောက်အပေါ် Imprint အဘယျသို့သောရှိလိမ့်မည်နည်း စစ်မှန်သောဘဝ၌မိမိတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမျှော်မှန်းချက်မှအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုအလိုတော်ရှိသနည်း
ဝမ်းနည်းစရာအမှန်တရားမှာ၊ မကြာမီ VR porn သည်ပုံမှန်ဖြစ်သကဲ့သို့ယနေ့ခေတ်တွင်ပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီးမည်သူမျှယင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဘာမှလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
“ ဘာအန္တရာယ်လဲ?” ယောက်ျားလေးများကပြောလိမ့်မည်။ လှပသောအလှည့်လှည့်လှည့်နေသောကြက်ကိုးကွယ်သောမင်းများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိလာသောအခါသူတို့၏ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်သောပြissueနာများကြောင့်မိန်းကလေးများအဘယ်ကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာမရနိုင်သည်ကိုသူတို့တွေးမိလိမ့်မည်။
ငါ "! အိုင်တီမကြည့်", ဒါပေမယ့်အများဆုံးစကားကိုနားမထောင်ကြလိမ့်မည်ယောက်ျားပြောပြနိုင်ပါတယ်။ အချိန်မရွေးငါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်အကြံပေးကကြည့်ရှုရန်ယောက်ျားထံမှတောင်းဆိုချက်တစ်ခုရပေမယ့်ဘယ်သူမျှမငါ၏အသတိပေးချက်များဦး။ ဆန့်ကျင်တွင်, များစွာသောအလွန်စိတ်အားထက်သန်နှင့်အတူအတွက် plug ။
porn အရည်အသွေးအမျိုးသမီးများကိုဆွဲနိုင်သူကိုသူတို့အဘို့သက်ရောက်မှုဒါမကောင်းတဲ့လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ, သို့သော်အများဆုံးတို့သညျဤနိုင်စွမ်းမရှိကြပေ။ အများစုမှာယောက်ျား, ဂိမ်းသင်ယူအားကစားရုံ hit နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သူတို့ကိုယ်သူတို့, ဤလူတို့သညျမိမိတို့၏လိင်အသက်တာ၌ခံရကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါဒါအကောင်းမြင်ဘူး။ ဆယျနှစျမှာတော့သူတို့ဖြစ်ကောင်းအမျိုးသမီးတွေထက်ပိုပေါရာဏအောင်, VR ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်အတူတက်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်အတုဆွပေးကြိုးမဲ့ sexbots ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အစဉ်အမြဲငါငါသူတို့ပင်ဝိုင်ဖိုင်ရှိပါကသူတို့ကံကောင်းလိမ့်မယ်ကလေးများရှိပါကပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ထိုနည်းလမ်းများအရာနှင့်အတူ, သွားကြသည်!
မာကု Zolo ခြင်းဖြင့်မူရင်းဆောင်းပါး